बहुमुखी प्रतिभाका धनी भानुभक्त आचार्य/ विष्णुलाल श्रेष्ठ | Online Sahitya
यतिखेर नेपाली साहित्य आकाशमा सबैभन्दा बढी चर्चा आदिकवि भानुभक्त आचार्यकै छ । अहिले हामी आदिकविको सम्झना गरिरहेछौँ । हामी नेपाली! नेपालकै भूमिमा उभिएर वर्षको एकचोटि औपचारिकता निभाउँछौँ । विद्यालयका विद्याथीलाई प्लेकार्ड, ब्यानर, भानुको तस्विर बोकाएर प्रभातफेरि गछौर्ं, कविता वाचन गर्छौं । राज्यका उच्च ओहोदामा आसीन पदाधिकारीले भानुभक्तका बारेमा अनेक कथन र अध्ययन-अनुसन्धानको योजना सुनाउँछन् । योजना कार्यान्वयनको सुरसार हुँदानहुँदै अर्को जन्मजयन्ती आउँछ सुटुक्क । अनि त्यो पुरातन शैली पुनरावृत्त हुन्छ विगतका वर्षहरूमाजस्तै ।
भारतका सिक्किम, दार्जिलिङ्, आसामलगायतका ठाउँहरूमा साँच्चिकै भानुजयन्ती मनाउँछन् ती प्रवासी नेपालीहरू! 'यी भानु बाजेले नेपाली साहित्यलाई यति धेरै माथि पुर्‍याए, साहित्यको साख बचाउने पनि उनै हुन्' भनेर । ती नेपाली जो विदेशी भूमिमा रोजगारी गर्छन्, स्थायी बसोबास गर्छन्! उनका हृदय-हृदयमा भानुभक्तले बास गर्छन् । प्रवासी नेपालीहरू आस्था र श्रद्धाले शीर निहुराउँछन् । चोक-चोकमा भानुका पूर्ण कद र अर्धकदका सालिक उभ्याउँछन् । यहाँभन्दा त्यहाँ भानुका बारेमा चर्चा परिचर्चा, उल्लास, उमङ्ग र हर्षोल्लास बढी हुन्छ । जे होस् हामी कर बलले वा आस्थाले उनको जयन्ती मनाउँछौँ, मनाइरहेकै छौँ ।
भानुभक्त आदिकवि होइनन्! बरू नेपाली भाषाका पहिला कवि हुन् भनेर नाकनिक गर्नेहरूले त्यसो भए 'आदिकवि' को हुन् भनेर किन किटान गर्न सकेनन् ? त्यसअघि लेखिएका रामायण नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएका सरल, उत्कृष्ट, मौलिक हुन् भनेर किन पुष्ट्याइँ गर्न सकेनन् ? रामायणको संस्कृत भाषाबाट नेपालीमा अनुवाद भानुभक्तपूर्वका कविहरूले गरिसकेकै हुन् । त्यसो भए ती भानुभक्तीय रामायणभन्दा पहिले नै किन लोकपि्रय हुन सकेनन् ? प्रत्येक नेपालीको जनजिब्रोमा किन भिज्न सकेन ? घर-घर, टोल-टोल र गाउँबस्तीहरूमा रामायण किन गाइएन ? भानुभक्तीय रामायणजस्तो किन सर्वत्र चर्चा हुन सकेन ? तिनमा नेपालीपन किन देखिएन ? भानुभक्तको जस्तो नेपाली जनजनले अरू कविहरूको चित्र किन आˆनो मानसपटलमा राख्न सकेनन् ? किन सबैले भानुभक्तको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे ? ९९ प्रतिशत नेपाली स्रष्टाहरूले 'भानुभक्त नै नेपाली सहित्यका आदिकवि हुन्, उनले लेखेको -अनुवाद गरिएको भनिएको) रामायण नितान्त मौलिक हो । त्यसैले आज पनि रामायणका सरल श्लोकहरू जनजिब्रोमा टाँसिएकै छ ।' भने । उनी अजर छन्, अमर छन् नेपाली जनजनमा, नेपाली मनमनमा । उनले रामायण नलेखेका भए हाम्रो नेपाली साहित्य आज यति फस्टाउने थिएन कि !
होलान् एकआध लेखकहरू जो आलोचना गर्नकै लागि आलोचक बने, बनिरहेका छन्, बनिरहनेछन् । तर, समयक्रममा ती पूर्वाग्रह त्यसै सेलाएर जानेछन् । किनभने उनीमाथि लागेका आरोप औचित्यहीन, आधारहीन र तथ्यहीन छन् । करिव दुईसय वर्षअघिको नेपाली साहित्यको रूपरेखा हेर्ने हो भने भर्खर वामे सरेको अवस्थामा पनि थिएन नेपाली भाषा । संस्कृतमा लेखिएको वाल्मीकिकृत रामायण नेपालका धेरै कविहरूले नेपाली भाषामा अनुवाद नगरेका होइनन् । तर, ती अनुवाद संस्कृतबाट गरिएको शब्दानुवाद मात्र थियो । कखरा नपढेका नेपाली पाठकहरूले कसरी बुझ्छन् ? पाठकका जनजिब्रोमा कसरी भिज्छन् ? करबलले ती लोकपि्रय र प्रख्यात हुने होइनन् । तथ्यपरक आरोप र आलोचना ग्राहृय हुन सक्छ तर पूर्वाग्रहले पीडित भएर लगाइएको मिथ्याआरोपको कुनै तुक हुँदैन । उनीमाथि लगाइएका आरोप विस्तारै मिथ्यासावित हुँदैजानेछन्, शङ्का छैन ।
भानुभक्तले आफूले रामायणको नेपालीमा अनुवाद गर्नुभन्दा अघिका कविहरूले गरेका अनुवाद नदेखेका, नहेरेका र नपढेका होओइनन् । यदि ती नेपाली पाठकले पढ्नसक्ने र बुझ्नसक्ने भइदिएको भए उनले अर्को रामायण किन लेखिटोपल्थे होलान् र ! भानुभक्तीय रामायणलाई कतिपय समालोचक र लेखकहरूले 'मौलिक रामायण' भन्न रूचाउँछन् । किनभने यो संस्कृतबाट गरिएको भावानुवाद हो । त्यसैले रामायणमा प्रयुक्त शब्द, पङ्िक्त, भाव र भाषा नेपाली जनजिब्रोमा भिज्यो । आदिकालदेखि गाउँघरका बिहे-बटुलो, भोज भत्यार र चाडपर्वमा गाइने रामायणले निकै चर्चा पायो । पाठकहरूले रामायणलाई सिरानी बनाए । सिक्किम, दार्जलिङ, आसाम, सिलीगुढी र अन्य धेरै ठाउँमा भानुभक्तको रामायण उत्तिकै चर्चित र लोकपि्रय बन्यो । त्यो साख अझै उस्तै छ, रहनेछ । विसं १८९८ देखि लेख्न थालिएको रामायण भानुभक्तले १९१० मा पूरा गरे । रामायण विशुद्ध सरल नेपाली भाषामा प्रकाशित भइसकेपछि त्यसको व्यापक चर्चा भयो । सामान्य पाठकले पनि यसलाई भाका हालेर पढ्न थाले । सबै ठाउँमा रामायण गाउन थालियो । नेपालीको मनमस्तिष्कमा रामायणले अमिट छाप छाड्यो ।
आजको दिनमा भानुभक्तलाई संझदा उनका अनेक पाटा उघारिन्छन् । उनी बहुआयामिक आशुकवि थिए, कवितामै संवाद गर्थे । भनिन्छ! जन्मकुण्डलीदेखि विन्तीपत्रसम्म कवितामै लेख्थे रे । उनले लेखेका तत्कालीक कविता हेर्दा पनि उत्तिनखेर लेखेको देखिन्छ । वधूशिक्षा, भोलिवाद, गजाधर सोती आदि कविता तुरून्तै लेखेको प्रतीत हुन्छ । उनका विविध आयामका कविता छन् । छोरा र मित्रहरूलाई कवितामै पत्र लेख्थे । कवितामा सामाजिकता पाइन्छ । शिक्षा, नैतिकता, चारित्रिकता पाइनु उनका कविताका खास विशेषता हुन् । उनी हक्की कवि हुन्, जे देख्थे त्यही लेख्थे । खेतका सँधियार गिरीधारी भाटसँग उनले लामो समय मुद्दा लडे । मुद्दा उनले जिते पनि । तर उनलाई यतिलेमात्र चित्त बुझेन । 'भाट' शब्दसँगै घृणा जागेपछि आˆनो घरको छानाबाट जम्मै भाटा निकालीदिए । भाटा बहिष्कार गर्ने यिनलाई रामकृष्ण शर्माले 'चाणक्य' भनेका छन् ।